Kitra – «Pro league 2019»: mitarika ny CNaPS sy ny Cosfa | NewsMada
Kitra – «Pro league 2019»: mitarika ny CNaPS sy ny Cosfa
Taorian’ny fahavitan’ny andro fahenina hiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, taranja baolina kitra “Pro league 2019”, ekipa roa no mitarika eo amin’ny filaharana dia ny CNaPS Sport Itasy sy ny Cosfa Analamanga izay tsy mbola resy mihitsy hatreto. Samy manana isa 16 izy ireo ka fandresena dimy ary ady sahala iray. Manan-tombo eo amin’ny “goal average” anefa ny CNaPS Sport.
Fahatelo, ny Ajesaia Bongolava izay manana isa 13, saingy tsy ampy lalao iray. Ny Boaikelin’ny Ajesaia hifanandrina amin’ny Fosa Jr Boeny, rahampitso alarobia. Fihaonana tafiditra amin’ny andro fahenina ho an’ny Ajesaia, saingy andro fahefatra ho an’ny Fosa Jr.
Eo amin’ny laharana fahefatra ny Elgeco Plus Analamanga, arahin’ny AS Jet Mada Itasy, samy manana isa 10. Fahenina ny AS Adema Analamanga izay tsy mbola manana afa-tsy isa 8. Nandresy indroa, ady sahala indroa ary resy indroa. Samy manana isa enina avy ny 3FB Toliara sy ny Fosa Jr Boeny ary isa efatra kosa ny an’ny Tia Kitra sy ny FC Ilakaka. Tsy mbola nitoko kosa hatreto ny Zanakala FC sy ny Club M Mananara, resy hatrany tamin’ireo lalao nataony.